Expressen အတွက်ယေရှုအကြောင်းတည်ရှိသည် | Apg29
857 online! | Sidvisningar idag: 243 491 | Igår: 266 491 |
Photo: Express ကို။
Expressen ယေရှုအကြောင်းတစ် nidartikel ရှိပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့မိုဟာမက်အကြောင်းကိုအလားတူဆောင်းပါးဖတ်ပါလိမ့်မယ် အကယ်. တွေးမိ?
အခုအသစ်လာ စာအုပ် သမိုင်း၏ယေရှု၏ "သစ်ကိုအလင်း" ကိုသွန်းကြောင်းသုတေသီများက Cecilia Wassénနှင့် Tobias Hägerlandကရေးသား "ဒီအမည်မသိသညျယရှေု" ။ တနည်းအားဖြင့်နောက်တဖန်သညျယရှေုခရစျ၏အယူမှားအယူဝါဒဖြစ်ပါတယ်။
သူ့အကမျြးစာကိုသိရှိသူမည်သူမဆိုတိုက်ရိုက်ဒီကတဆင့်မြင်သည်။ စစ်မှန်တဲ့ဘို့ကမျြးစာအယူမှားသည်မဟုတ်ဖြစ်ပါတယ် "ဟုသုတေသနလုပ်ငန်း" မိန့်ကြောင့်အရေးမထားဘူး။
အဆိုပါဆောင်းပါးကမျြးစာကိုအတူတသမတ်တည်းမဖြစ်သည့်, ယရှေုစာမတတ်သူခဲ့ကြောင်းပြောပါတယ်။ အလွန်တရာအံ့ဩကြ၏နိုင်အောင်တောင်မှအသက်အရွယ် 12 မှာဗိမာန်တော်၌ဆုံးမဩဝါဒပေး။
အဆိုပါဆောင်းပါးတွင်ယရှေုသညျမဖတ်နိုင်ကြောင်းပြောပါတယ်, မကမျြးစာကိုပါဘူး။ ယရှေုသညျတစျခုအချိန်မှာကျဟရှောယမှဖတ်ပါ။
ဆောင်းပါးပုံမှန်အတိုင်းရှိပါတယ်ကတည်းကသူသည်မိမိလုပ်ငန်းကိုစတင်မီကသညျယရှေုလက်ထပ်ခဲ့ပေမယ့် "ဇနီး" သေတည်ရှိသည်။ သိပ္ပံပညာရှင်များသည်တစ်ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းစိတ်ကူးစိတ်သန်းရှိသည်!
အနီးကပ်ယေရှုအား Live လူမုသာစကားနှင့်ယေရှု၏မိစ္ဆာရုပ်ပုံပြန့်နှံ့လာသောအခါသခင်အဖြစ်သူ့ကိုရှိသည်ဖို့, ကမျြးစာကိုဖတ်, ထို့နောက်သင်အားဖြင့်ရှုမြင်။
Vecka 42, torsdag 19 oktober 2017 kl. 23:40